समान काम : समान दाम | चितवन पोष्ट
समान काम : समान दाम
छिमेकी जिल्ला मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले महिला र पुरूषको समान कामको ज्याला समान दिने निर्णय गरेर महŒवपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ । महिला–पुरूष समावेशिताका जतिसुकै आवाज उठे पनि हालसम्म पनि समान काम गर्ने महिला र पुरूषबीच ज्याला भने असमान रहँदै आएको छ । वर्षौंदेखिको यस्तो विभेद हटाउन मनहरी गाउँपालिकाले चौँथो गाउँसभामा सामाजिक सुधार ऐन पारित गरेर गाउँपालिकाभरका सबै महिला–पुरूषलाई एउटै कामको बराबरी ज्याला दिने व्यवस्था गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । महिलाले पुरूषले जत्तिकै समय र उत्तिकै काम गर्दा ज्यालामा भने असमानता रहँदै आएको थियो । ज्यालादारी काममा महिलाले भन्दा पुरूषले २०० रुपैयाँ बढी ज्याला पाउँदै आएका थिए । पुरूषप्रधान समाजमा चलाइएका यस्ता प्रचलनले महिला अन्यायमा पर्दै आएका थिए । र, अद्यापि पुरूषको तुलनामा अहिले पनि ज्यालामा महिलाहरु ठगिँदै आएका छन् । समतामूलक समाज निर्माणका लागि हकअधिकारहरु पनि समान हुनुपर्छ । समान कामका लागि समान दामले केही हदसम्म लैँगिक विभेद हट्ने विश्वासचाहिँ गर्न सकिन्छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको लामो समय बितिसकेको छ । तर, संघीयताको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति अहिलेसम्म पनि जनताले चाख्न सकेका छैनन् । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सिंहदरबारको अधिकार मनहरी गाउँपालिकाजस्ता ७६१ स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अझै पनि सिंहदरबारको रवाफ कायमै छ । किनभने, स्थानीय सरकार भनिएको स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार चिन्न सकेको देखिँदैन । अझै पनि सिंहदरबारकै निर्णय पर्खिने नियति छ । स्थानीय तहले किन सरकारको गरिमा आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् ? स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएर जान किन संकीर्णता देखाइरहेका छन् ? स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी पनि कसरी चाँडै रमाना हुने दाउ छोप्दैछन् ? स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवाद बढिरहेका छन् । काममा असहयोगमात्र होइन, हात नै हालाहालसम्मका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । सुशासन, समानता र समावेशी समाजका लागि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले कामभन्दा बढी रमिता देखाइरहेका छन् । जसका कारण सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेर पनि लागू हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय तहले सामाजिक सुधार ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वप्रथम जनप्रतिनिधिले नै तत्परता देखाउनुपर्छ । अहिले कैयौँ ऐन बन्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या छ । समाज सुधारका लागि सामाजिक सुधार ऐन कार्यान्वयन हुनैपर्छ । मनहरी गाउँपालिकाले समान ज्याला मात्रै होइन विवाहमा बाजागाजासहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने, केटा वा केटीपक्षले गर्ने भोजमा नजिकका नातेदार वा इष्टमित्रमध्येबाट ५१ जनाभन्दा बढी आमन्त्रण गर्न नपाइने र दाइजो लेनदेनमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तै न्वारन, जन्म दिवस, पास्नी, व्रतबन्ध र पितृकार्य गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गर्न नपाइने र हजार रुपैयाँभन्दा बढी उपहार र दक्षिणा दिन ऐनले रोक लगाएको छ । पैसाको बाजी थापेर जुवातास, लुँडो, पुल हाउस र लंगुरबुर्जा खेल्न र खेलाउन रोक लगाइएको छ । देउसीभैलो खेल्दा करकापमा पारेर दक्षिणा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा घरेलु मदिरा उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तरकारी बालीमा प्राविधिकको सुझावबिना विषादी प्रयोग गर्न नपाउने र विषादी प्रयोग गरेको तरकारी निश्चित समय पार नगरीकन बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन र फजुल खर्चसमेत नियन्त्रण गर्न यस्तो ऐन बनाइएकाले यसको अविलम्व कार्यान्वयन गरी सभ्य र समावेशी समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।